Xildhibaanada Baarlamanka Soomaaliya oo Maanta meelmariyay Xukuumada Cusub – SBC
Xildhibaanada Baarlamanka Soomaaliya oo Maanta meelmariyay Xukuumada Cusub
Posted by Webmaster on Noofember 13, 2012 Comments
Mudane yaasha Baarlamanka Soomaaliya ayaa Maanta fadhigii ay isug yimaadeen guriga golaha shacabka ee Magaalada Muqdisho waxa ay ku ansixiyeen golaha cusub ee wasiirada uu soo magacaabay raiisul wasaaraha dalka.
Kulanka oo markii hore ku bilwday si caadi ah ayaa waxa ala hordhigay xildhibaanada Baarlamanka Ajandaha xukuumada cusub hadii la ansixiyo ay ku shaqeyneyso waxaana ka dib halkaasi yimid Labada masuul ee ugu sareeya dowlada SOomaaliya waa Raiisul wasaare Saacid, Madaxweynaha Dalka Xasan Sheeq iyo weliba qaar ka mid ah golaha wasiirada cusub
Gudoomiyaha Baarlamanka Maxamed Sheeq Cismaan Jawaari ayaa ka codasaday Saxaafada in ay banaanka ka istaagto Holka baarlamanka uuna madaxweynaha Soomaaliya hadal kooban u jeedin doono Xildhibaanada.
Ka dib kulan kooban oo albaabada u xiran ayaa waxaa soo baxay Madaxweyne Xasan Sheeq, waxaana saxaafada loo sheegay in ay gudaha dib ugu soo laabtaan si ay u tabiyaan codeynta xildhibaanada ee xukumada cusub.
Waxaa loo guda galay cod bixin iyadoo ay codeeyeen 225 xildhibaan waxaana ansixiyay oo ogolaaday xukuumada Cusub mudaneyaal gaaraya 219, waxana diiday 3 xildhibaan iyadoo ay ka aamuseen 3 xildhibaan,, waxaana sidaasi ansax ku noqotay xukuumadii tirada yareed ee uu soomagacaabay raiisul wasaare Cabdi Faarax Shirdoon sida uu ku dhawaaqay Xildhibaaanka koobaad ee Baarlamanka Mr Jawaari.
Ka dib waxaa halkaasi hadal ka jeediyay Raiisul wasaaraha xukuumadiisa maanta la meel mariyay Cabdi Faarax Shirdoon Saacid, waxaana uu uga mahad celiyay xildhibaanada sida sharafta leh ee ay u meel mariyeen xukuumadiisa .
Waxa uu markale ku dhawaqay in qodobadii ku jiray qorshaha u degan xukuumada cusub 4ta sano ee soo socota in uu balanqaadayo fulinteeda sida ugu fiican.